News - Mgbe akụkụ nke ekwentị ngosipụta gosipụtara, ebee ga-enwe mmeri nke ihuenyo ngosi ekwentị mkpanaaka
Ikike abụwo ụzọ dị mkpa na mmepe nke ihuenyo ekwentị mkpanaaka, mana ekwentị mkpanaaka nwere ihe karịrị sentimita 6.5 adabaghị maka ijide otu aka. Ya mere, ọ naghị esiri ike ịnọgide na-agbasa ogo ihuenyo, ma ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị ekwentị mkpanaaka ahapụwo mgbalị dị otú ahụ. Kedu otu esi eme edemede na nha ihuenyo edozi? Yabụ, ọ na - abụ ihe kacha mkpa iji nwekwuo ogo nke ngebichi.
Ebee ka ọganihu nke ekwentị mkpanaaka ga-aga mgbe akụkụ nha
Echiche nke òkè ihuenyo abụghị ihe ọhụrụ. Ọtụtụ ụdị na-akọ akụkọ na nke a kemgbe afọ ole na ole mbụ mgbe ekwentị izizi pụtara. Agbanyeghị, n'oge ahụ, ọnụọgụ ihuenyo ahụ karịrị naanị 60%, mana ugbu a ntoputa nke ihuenyo zuru oke na-eme ka nha ihuenyo nke ekwentị mkpanaaka gafere 90%. Iji meziwanye ogo nke ihuenyo, imepụta igwefoto na-ebuli n'ahịa. N'ụzọ doro anya, ọnụọgụ nke ihuenyo aghọwo isi nduzi nke njikarịcha ihuenyo ekwentị mkpanaka n'ime afọ abụọ gara aga.
Igwe ekwentị zuru oke na-ewu ewu, mana enwere oke iji meziwanye nha ihu
Agbanyeghị, nnabata nke imeziwanye ihe ngezi doro anya. Kedụ ka ekwentị mkpanaka ga - esi gaba n'ihu? Ọ bụrụ na anyị a attentiona ntị na nchọpụta ahụ, anyị ga-achọpụta na okporo ụzọ nke mkpebi ejiri ogwu kpuchie ogologo oge. 2K na ekwentị mkpanaaka ihuenyo zuru, na ọ dịghị doro anya utịp ke size nke 6.5 sentimita asatọ na 4K mkpebi. Enweghị ohere maka ọganihu na nha, mkpebi na ihuenyo. Ọ nwere naanị otu ọwa nwere agba fọdụrụ?
Onye edemede ahụ na-eche na ihuenyo ekwentị mkpanaaka n'ọdịnihu ga-agbanwe site n'akụkụ abụọ nke ihe na nhazi. Anyị agaghị ekwu maka ihuenyo zuru oke. Nke a bụ usoro izugbe. N'ọdịnihu, a ga-eji ekwentị zuru ezu abanye ekwentị mkpanaaka niile. Ka anyị kwuo gbasara ntụzịaka ọhụụ.
OLED PK ihe eji agbaze bu uzo nkwalite
Na mmepe na-aga n'ihu n'ihu nke OLED ihuenyo, ngwa nke OLED ihuenyo na ekwentị mkpanaaka aghọwo ebe nkịtị. N'ezie, ihuenyo OLED apụtawo na ekwentị mkpanaaka afọ ole na ole gara aga. Ndị maara nke ọma banyere HTC kwesịrị icheta na HTC One s na-eji OLED ihuenyo, Samsung dịkwa ọtụtụ ekwentị mkpanaaka na-eji OLED. Otú ọ dị, ihuenyo OLED adịghị eto eto n'oge ahụ, na ngosi agba agba ezughị oke, nke na-enye ndị mmadụ mgbe niile mmetụta nke "arọ etemeete". N'ezie, nke ahụ bụ n'ihi na ndụ nke ihe OLED dị iche, na ndụ nke ihe OLED nwere agba dị iche iche dị iche, yabụ ọnụọgụ nke ihe OLED dị mkpụmkpụ dị karịa, yabụ arụ ọrụ agba niile metụtara.
HTC one s phones na-eji OLED meziri
Ugbu a ọ dị iche. Igwe OLED na-eto eto ma ụgwọ na-ada. Site na ọnọdụ ugbu a, yana apụl na ụdị ekwentị ọ bụla maka ihuenyo OLED, mmepe nke ụlọ ọrụ OLED na-aga ngwa ngwa. N'ọdịnihu, ihuenyo OLED ga-enwe ọganiihu n'ihe metụtara mmetụta na ọnụ ahịa ya. N'ọdịnihu, ọ bụ usoro izugbe maka ekwentị mkpanaka dị elu iji dochie anya OLED.
Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ekwentị igwe OLED na-arịwanye elu
Na mgbakwunye na ihuenyo OLED, enwere ihu ihuenyo. Screensdị ihuenyo abụọ ahụ bụ n'ezie ihe na-enwupụta nke onwe, mana nchapụta nke ihuenyo qled dị elu, nke nwere ike ime ka foto ahụ pụta ìhè. N'okpuru otu agba gamut arụmọrụ, ihuenyo qled nwere mmetụta "na-adọrọ anya".
N'ikwu ya n'ụzọ dị mkpirikpi, nchọpụta na mmepe nke ihuenyo nledo na-agbada n'azụ ugbu a. Agbanyeghị na TV ndị a na-atụgharị n’ahịa, ọ bụ teknụzụ na-eji ihe ndị nwere ajị iji mee modulu ọkụ azụ ma mepụta sistemụ ọkụ ọhụụ ọhụụ site na ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, nke abụghị ezigbo ihu igwe. Otutu ndi mmadu adighi anya nke oma. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụdị amalitela ị paya ntị na nyocha na mmepe nke ezigbo ihu igwe. Onye edemede ahụ buru amụma na ụdị ihuenyo a nwere ike ibu ụzọ tinye ya na ihuenyo mkpanaka.
The ọhụrụ mgbalị direction nke mpịachi ngwa kwesịrị ikwenye
Ugbu a, ka anyị kwuo maka owuwu ahụ. Na nso nso a, onye isi ala nke Samsung kwupụtara na a ga-ewepụta ekwentị mkpirisi ekwentị ya na njedebe nke afọ. Yu Chengdong, onye isi oche nke azụmaahịa Huawei na-azụ ahịa, kwukwara na ekwentị mkpakọ ekwentị na-esonye na atụmatụ Huawei, dị ka akwụkwọ akụkọ German welt si kwuo. Ndi mpịachi ọdịnihu direction nke mobile ihuenyo development?
Ma udi nke mpịachi ekwentị mkpanaaka bụ na-ewu ewu ka kwesịrị inyocha
Igwe OLED na-agbanwe agbanwe. Otú ọ dị, teknụzụ nke mkpụrụ na-agbanwe agbanwe etobeghị. Igwe OLED anyị hụrụ bụ tumadi ngwa ngwa. Ekwentị mpịachi mpịachi chọrọ ihuenyo dị nro, nke na - eme ka nsogbu nke nrụpụta ihuenyo rụọ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị na ihu dị ugbu a, enweghị nkwa nke inye ezigbo ego.
M na-atụ anya na mpịachi mobile igwe agaghị aghọ mainstream
Ma ọdịnala LCD ọdịnala enweghị ike iru ihuenyo na-agbanwe agbanwe, naanị na nsonaazụ ahụ gbagọrọ agbagọ. Ọtụtụ E-egwuregwu ngosipụta bụ curved imewe, n'ezie, ha na-eji LCD ihuenyo. Mana ekwentị ekwenti ekwesighi ekwesiri maka ahia. Samsung na LG amalitela ekwentị mkpanaka, ma azịza ahịa ahụ abụghị nnukwu. Iji ihuenyo LCD iji mee ka ekwentị mkpịsị aka na-apịaji ga-enwe ọnya, nke ga-emetụta ahụmịhe ndị ahịa.
Onye edemede ahụ na-eche na mpịachi ekwentị mkpanaaka ka chọrọ OLED ihuenyo, mana agbanyeghị na mpịachi ekwentị mkpanaaka na-ada ụda, ọ nwere ike ịbụ dochie anya ekwentị mkpanaaka. N'ihi oke ọnụ ya, ihe ngosi ngwa ngwa edoghị anya, yana nsogbu na nrụpụta ngwaahịa, ọ gaghị abụ isi dị ka ihuenyo zuru oke.
N'ezie, echiche nke ihuenyo zuru oke ka bụ ụzọ ọdịnala. Ihe kachasị mkpa nha ihuenyo bụ ịgbalị imeziwanye ngosipụta ngosipụta na oke nha mgbe nha ekwentị mkpanaaka agaghị enwe ike ịgbasa. N'iji ngwa ngwa ihuenyo zuru oke na-aga n'ihu, ihuenyo zuru oke agaghị aghọ ihe na-akpali akpali n'oge na-adịghị anya, n'ihi na ọtụtụ ngwaahịa ntinye na-amalite ịhazi nhazi ihuenyo zuru ezu. Ya mere, n'ọdịnihu, ọ dị mkpa ka a gbanwee ihe na nhazi nke ihuenyo ahụ iji nọgide na-ekwe ka ihuenyo ekwentị mkpanaaka nwere ọhụụ ọhụrụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ teknụzụ nke nwere ike inyere ekwentị aka ịbawanye ngosipụta ngosipụta, dịka teknụzụ ntolite, teknụzụ 3D anya ọtọ, wdg, mana teknụzụ ndị a bụ enweghị ngwa ndapụta ngwa dị mkpa, yana teknụzụ etozubeghị, yabụ ọ nwere ike abughi isi uzo ozo di n'ihu.